हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेज विश्वविद्यालयकै मोडेल कलेज बन्नेछ : उपकुलपति कोइराला « Sansar News
हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेज विश्वविद्यालयकै मोडेल कलेज बन्नेछ : उपकुलपति कोइराला
२० बैशाख २०७९, मंगलवार ०८:०२
काठमाडौं । हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेज पुर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयकै मोडेल कलेज बन्ने उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. यादबराज कोइरालाले बताएका छन् । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजको पुतलिसडक स्थित भवनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उपकुलपति प्राडा. कोइरालाले कलेजले पुर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयको नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । साथै उनले विश्वविद्यालयको अहिलेसम्मको विकासमा कलेजले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा थप विकास गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रमका अतिथि तथा पुर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्टार निलम पोख्रेलले हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेज अहिले विद्यार्थीहरुको रोजाइको कलेज बन्दै बताए । कलेजले भौतिक पुर्वाधार र व्यवस्थापन पक्ष राम्रो बनाएको भन्दै उनले कलेजको व्यवस्थापन पक्षलाई धन्यबाद दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कलेजले उत्कृष्ट शैक्षिक सुविधा विकास गरेको र सो कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गरेको कुरामा आफु विश्वस्त रहेको पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका परिक्षा नियन्त्रक प्राध्यापक मोहन बहादुर बस्नेतले बताएका थिए । साथै कलेजले आगामी दिनमा थप विकास गर्ने शुभकामना उनले दिएका थिए । त्यस्तै कार्यक्रमका अर्का अतिथि तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राडा. बिनोद पराजुलीले आफ्नो भवन बनाउनु र सोही ठाउँमा अध्ययन अध्यापन गराउन पाउनु गौरबको विषय भएको बताएका थिए । कलेजको लागि यो खुसीको कुरा भएको बताउँदै उनले आगामी दिनमा कलेजले थप विकास गर्ने शुभकामना प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै पुर्वाअञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति डा. शन्देशदास श्रेष्ठले हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई थप सहयोग गरेको बताएका थिए ।
हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजले काठमाडौं पुतलीसडकमा आधुनिक र विशाल नयाँ भवनको निर्माण गरेर अध्ययन अध्यापनलाई शुरुवात गरेको छ । वैशाख १९ गते सोमबार कलेजले एक समारोहको आयोजना गरी उक्त नयाँ भवनको उद्घाटन गरेको छ । नयाँ भवनको उद्घाटन पुर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. यादवराज कोइरालाले गरेका थिए । उक्त भवन उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण कोइरालाले गरेका थिए भने सञ्चालन नारायण आचार्यले गरेका थिए । कार्यक्रममा कलेजका सञ्चालक, अतिथि, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
शैक्षिक संस्था आजदेखि ६ दिनसम्म बन्द
तोकियो कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र (सूचीसहित)